Maxay u kala duwan yihiin inta udhaxeysa $ 30 iyo $ 300-dollar oo qasabad?
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Maxay u kala duwanyihiin inta udhaxeysa $ 30 iyo $ 300 qasabada biyaha?
2020 / 10 / 21 QoondayntaTilmaamaha qasabada 7279 0
Muujinta farqiga u dhexeeya $ 30 iyo $ 3,00 qasabadaha
Kala soocida walxaha qasabada: Qalabka qasabada ee caadiga ah ee suuqa maanta yaalaa waa: birta birta ah, birta oo dhan, naxaasta, qasabadaha iskujira ee zinc iyo qaybaha kale.
RassBrass: Brass waa sheyga ugu caansan ee soosaarka qasabada. Waxay ka samaysan tahay heerka caalamiga ah ee H59 / H62 copper. Dareemku wuxuu kobciyaa caaryada birta loogu talagalay tuurista cuf isjiidka, dhumucdiisuna waa mid isku mid ah, guud ahaan 2.5-3.0 mm. Tuubada laga sameeyay naxaasta waxaa lagu gartaa: miridh la'aan, adkeysi, anti-oksaydh, iyo nadiifinta biyaha.
Daawada incZinc: maaddada heerka-hooseeya. Cufnaanta isku-darka zinc wuxuu ka hooseeyaa kan naxaasta ah, oo gacanta ayaa ka culus tan tubbada naxaasta ah. Dusha sare ee daawaha zinc way fududahay in laga oksiideeyo gidaarka gudaha, budada oksaydh cad ayaa dusha sare ka muuqan doonta. Awoodda ayaa aad uga liidata tan naxaasta ah, nolosha adeeggu ma dheereyso, maadada macdanta ayaa sareysa. Haddii qasabadda ka samaysan aluminium zinc ay jirtaa hal illaa laba sano oo keliya, way oksajiinaysaa oo way qudhmi doontaa.
Balaastikada wax lagu farsameeyo: tuubada balaastigga ah ee ABS waxay leedahay astaamaha u adkaysiga daxalka, iska caabinta gabowga, miridh ma leh, hogaan la'aan, sun lahayn, ur la'aan, cadaadis saa'id ah, miisaan fudud, dhisme fudud iyo qiimo hoose
Bir aan xadi lahayn: Qarniga 21aad, caafimaadka iyo ilaalinta deegaanka ayaa si tartiib tartiib ah u noqday mawduucyada cusub ee nolosha casriga ah. Bir aan xadi lahayn waa shey caalami ah oo la aqoonsan yahay oo caafimaad qaba laguna dhex beeri karo jirka aadanaha. Sidaa darteed, alaabada jikada iyo musqusha ee leh birta birta ah maadaama waxyaabaha ugu muhiimsan ay bilaabeen inay caan ka noqdaan wadamada Yurub iyo Ameerika.
Nidaamka wax soo saarka tuubada: ridaya macdanta, macdanta birta lagu shubay, mashiinka lagu shubo cuf isweydaarsiga ama tuurista cadaadiska hoose.
Inta badan qasabadaha suuqa ka hooseeya 150 yuan waxay ka samaysan yihiin shubista caaryada, oo badanaa loo yaqaan "ciid la helay". Alaabooyinka ay soo saartay geeddi-socodkan, qaab-dhismeedka gudaha ee biraha jirka ee waalka ayaa dabacsan, waana sahlan tahay in la sameeyo cilladaha gudaha sida "trachoma" iyo "stomata". Waxaa laga yaabaa inaan laga helin muuqaal ahaan. Laakiin muddo isticmaal ka dib, waxaa jiri doona dheecaan biyo, xiritaan liita ama xitaa cillado ka sii weyn. Qasabadaha fasalka-sare badanaa waxay qaataan tuurista cuf isjiidadka, iyo qaab-dhismeedka gudaha ee biraha jirka ee waalka waa mid cufan, oo leh tayo wanaagsan iyo nolol dheer. Isla jirka waalka, culeyska alaabooyinka ay soo saareen labada geeddi-socod waa ka duwan yahay, isticmaalka maaddooyinka sidoo kale waa ka duwan yahay. Farqiga udhaxeeya culeyska tuubada jirka iyo walxaha tuubada ee culeyska ayaa qiyaastii ah 1/4. Sidaa darteed, isla badeecaddu waxay leedahay qiime kala duwan.
Habka wax soo saar ee tuubada: birta naxaasta ah, kala-goynta → shubka (tuubista heerka-hoose leh ee tuuraynta ciida, qasabad tayo sare leh oo leh tuurista cuf isjiidadka) → nadiifinta ka dib tuubista inspection baaritaanka shubka → makiinada inspection baaritaanka dulqaadka baaritaanka dahaadhay → Golaha pressure cadaadiska tijaabada inspection kormeerka alaabta ee dhammaaday → baakadka → gaarsiinta.
Nidaamka wax soo saarka noocan oo kale ah oo leh 16 geeddi-socod adag, geeddi-socod kasta wuxuu leeyahay shuruudo adag oo ku saabsan habka wax soo saarka. Warshadda summaddu waxay ku saleysan tahay mabda'a alaabada heerka koowaad, alaabada heerka labaad looma oggola inay ka baxaan warshadda, laakiin soosaarayaasha yaryar ma noqon doonaan alaabada dayactirka heerka koowaad iyo labaad, marka farqi weyn ayaa u dhexeeya qiimaha. Sidaa darteed, markaad iibsaneyso qasabad, waa inaad weli doorataa qasabad nooc ah. Mid kastaaba waa wax soo saar tayo sare leh, soo saaraha yarna wuxuu kuxiranyahay nasiibka iyo dabeecada.
Muxuu qasabku u qarxaa?
Qasabadda qasabka ah maka dillaacday tayada wax soo saarka oo liita mise dad sameeyay? Waxaa jira laba sababood oo muhiim u ah jabinta qasabadda lama filaanka ah:
1. Tayada qasabada ma fiicna. Qalabka ceeriin ee soosaarayaasha qasabada liita inta badan maahan naxaas, laakiin waa qaar ka mid ah qalabka isku dhafan, sidaa darteed adkaanta qasabadda la soo saaray kuma filna. Rakibaadda dambe iyo adeegsiga, waxyeellada soo gaadhay tubbada iyo isbeddelada ku yimaadda cadaadiska biyaha ayaa si fudud u sababi kara tubbada oo kala go'da.
2. Si qaldan loo isticmaalo tuubada. Macaamiil badan ayaa laga yaabaa inaysan fahmin xoogga markay rakibayaan qasabada, taas oo ka dhigaysa qasabadii asalka ahayd "mid aan u qalmin" xitaa ka sii xun. Marka lagu daro tuubada weelka lagu dhaqo, qubeyska sidoo kale wuxuu leeyahay faahfaahin aad u muhiim ah oo badanaa la iska indhatiro. Dad badan ayaa jecel inay tubbada qubeyska ku rogaan tubbada qubeyska ka dib. Tani waxay u egtahay inay yareyneyso nolosha tuubada qubeyska waxayna noqoneysaa qatar qarsoon oo jabinta qubayska.
Ma kuu sheegayaa halka $ 300 oo qasabad ka qaalisan tahay $ 30 qasabad?
Tuunbooyinka hadda suuqa ku jira badanaa waxay ka samaysan yihiin bir bir ah, caag, zinc alloy, alloy copper, iyo bir bir ah. Birta kabka ayaa u nugul miridhku, caaggu wuxuu u nugul yahay gabowga, zinc alloy wuxuu leeyahay deganaansho liidata wuxuuna u nugul yahay inuu qarxo, taasoo keentay adeegsiga muddada-gaaban. Sidaa darteed, kuma talinayo inaad iibsato qasabadaha saddexdaan shey.
In kabadan 90% qasabadaha dhamaadka-sare ee gudaha iyo dibaddaba badanaa waxay doortaan shubka naxaasta. Naxaasku waa sheyga ugu haboon ee qasabada wuxuuna leeyahay saameyn bakteeriyada. Dhexdooda, naxaasta H59 ayaa ah tan ugu habboon, maadada macdanta ayaa sidoo kale uqalma. H62 naxaasta iyo macdanta "lead" ayaa ka sii yaraynaysa daxalka; In kasta oo birta biraha ka sameysan ay ka madax bannaan tahay macdanta `` lead '', haddana caan kuma aha xilligan iyada oo ay ugu wacan tahay geeddi-socodkeeda adag iyo faa'iidooyinka bakteeriyada bakteeriyada aan lahayn.
Qasabadda ayaa la daaraa oo la xidhaa maalin kasta, xudunta waalka ayaa go'aamisa nolosha adeegga qasabadda. Waqtiga xaadirka ah, xudunta dhoobada dhoobada ayaa ah waxyaabaha ugu habboon ee muhiimka u ah isticmaalka guriga. Qalabka xudunta sare ee qasabada ayaa badanaa la keenaa ama asal ahaan asal ahaan ka soo baxa dhoobada dhoobada, kuwaas oo adkaysi u leh isla markaana gaari kara 500,000 jeer iyada oo aan la dilin.
Xuddunta waalka dhaqameed waxay ka samaysan tahay qalab bir ah sida birta birta ah iyo naxaasta. Waxyaalaha birta ah ee noocan oo kale ah ayaa la xidhayaa oo la daxalayaa ka dib muddo dheer oo la istcimaalay, taas oo keenaysa qasabadaha oo xumaada ama xidhxidhnaan adag.
Tuubada marinka biyaha ee tuubada-dhamaadka-sare waxay ka samaysan tahay bir bir ah oo aan lahayn. Tuulada marinkeeda biyaha waa 304 tuubbo oo buuxa, maxaa yeelay cadaadiska biyaha ee 304 tuubadu xambaarsantahay iyo daahirsanaanta tayada biyaha ayaa dhamaantood Waa mid aad loo balan qaadayo.
Xumbada qasabada-dhamaadka-sare waxay macaamiisha siin kartaa dareen qubeys aad u raaxo leh. Isticmaalka qalabkan iyo qalabkan waxay xaqiijin karaan tayada wax soo saarka.
5. Teknolojiyada dusha sare
Dusha sare ee galvanized ee qasabadaha qiimaha sarreeya badanaa waxay leeyihiin dareen muraayad u eg. Markaad fartaada ku riixdo, raadadka gacmeedku isla markiiba way baaba'ayaan. Intaa waxaa sii dheer, tikniyoolajiyadda korantada elektaroonigga ah ee deegaanka u fiican waxay ka hortagi kartaa wasakhda labaad ee alaabta waxayna hubin kartaa biyo saafi ah. Inta badan alaabta nadaafadda ee qalabka, habka electroplating wuxuu asal ahaan u dhigmaa dahaadhka chrome.
6. Nolosha adeegga
Qasabadaha-dhamaadka-sare waxay leeyihiin tayo wanaagsan 5 sano kadib marka la isticmaalo, dhammaantoodna waxay buuxiyaan shuruudaha qaran ee biyo-badbaadinta. Adkaysiga, keydinta tamarta iyo ilaalinta bey'adahooda waxay muujinayaan qiimaha wax soo saarka. Nolosha waxtarka leh ee qasabadaha raqiiska ah waa mid aad u gaaban, xitaa ka dib marka la isticmaalo labo ama seddex bilood ka dib, waxaa jiri doona ka dib iibka ama shilalka, amniguna wuu hooseeyaa, sidaa darteed macaamiisha laguma talinayo inay iibsadaan.
7. Dammaanad-iibinta kadib
Waxaa soo saaray soosaarayaasha caadiga ah, oo leh nidaam adeeg qaran kadib iibka. Macno malahan alaabtu inay leedahay shil ama cilad, soo saaraha ama qeybiyaha ayaa mas'uul ka noqon doona xalintiisa wakhti kasta. Noocyada leh alaabooyinka qaabeynta sare ayaa badanaa ah noocyo tayo sare leh oo nadaafadeed, waxayna aad uga walaacsan yihiin iibka. Ereyga afka ee ay soo saarto shey kasta
Hore:: Doorashada Qasabada Jikada Saxda ah Next: Tilmaamaha Ugu Dambeeya ee Sida Loo Xulo 6 Nooc Oo Ka Mid Ah Qalabka Qalabka Musqusha
2021 / 02 / 04 5181
2021 / 02 / 03 4299
2021 / 01 / 28 3392
2021 / 01 / 28 2231